Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း) - Hello Sayarwon
Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း)
Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း) ကဘာလဲ။
ကျောက်အောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ အင်္ဂါအစုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်တစ်လုံးက ကျောရိုးရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက်စီမှာ ရှိပါတယ်။ သွေးတွေကိုစစ်ပေးပြီး ကိုယ်အတွင်းအဆိပ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ကျောက်ကပ်တွေဟာ အဆိပ်တွေကို ဆီးအိတ်ဆီပို့ပေးပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်က ဆီးသွားစဉ်မှာ အဆိပ်တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်တွေက ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းအညစ်အကြေးတွေကို လုံလုံလောက်လောက်မစစ်ပေးနိုင်တော့တဲ့အခါကျာက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းက အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကျောက်ကပ်က အညစ်အကြေးတွေကို မဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တော့တာေကြောင့် အရည်တွေစုမိပြီး ခြေထောက်၊ ခြေချင်းဝတ်ရောင်ခြင်းဖောခြင်း၊ခြေဖဝါးရောင်ခြင်း
Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ချေများတာတွေကတော့ အောက်ပါအချက်တွေထဲကတစ်ခုသို့ တစ်ခုထက်ပိုပြီးခံစားနေရသူတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ဆီသို့သွေးအရောက်နည်းခြင်း – ရုတ်တရက်ကျောက်ကပ်ဆီကို သွေးအရောက်နည်းခြင်းက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်သွေးအရောက်နည်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ရောဂါတွေကတော့
ဆီးစွန့်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ- ခန္ဓါကိုယ်က ဆီးမစွန့်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာ အဆိပ်အတောက်တွေစုပုံလာပြီး ကျောက်ကပ်ကိုဝန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါအချို့က ဆီးလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပါတယ်။ ဆီးကျိတ်( ယောင်္ကျားများတွင်အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိသောအမျိုးအစား)၊ အူမကြီး၊ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ ဆီးအိတ်ကင်ဆာတို့ပါဝင်ပါတယ်။ အခြားအခြေအနေတွေကနေလည်း ဆီးစွန့်ခြင်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကျေက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆီးအိတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အာရုံကြောများ ပျက်စီးခြင်း
အခြားအကြောင်းရင်များ- အချို့သောရောဂါနဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လည်း ကျေက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ ခုခံအားစနစ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်း လူးပတ်စ်ရောဂါ
များသောအားဖြင့် အူတွေကိုကူးစက်ဝင်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားများကူးစက်ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် သွေးနီဥများပေါက်ကွဲခြင်းရောဂါစု
သွေးကြောငယ်များအတွင်း သွေးခဲခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါ
ကင်ဆာကုဆေးများနဲ့ ခုခံအားစနစ်ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ဓါတုကုထုံးဆေးများ
Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆီးနမူနာကိုယူပြီး ဆီးအတွင်းပုံမှန်မဟုတ်ဘဲပရိုတိန်း၊သကြားပါဝင်နေခြင်း ကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းများကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က သွေးနီဥ၊သွေးဖြူဥပမာဏ၊ ဘတ်တီးရီးယားများနဲ့ ပါဝင်သမျှဆဲလ်များအားလုံးအရေအတွက်
ကိုတိုင်တာနိုင်တဲ့ ဆီးအနည်ထိုင်ခြင်းစမ်းသပ်နည်းကိုလည်း အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။
ဆီးသွားတဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို အလွယ်ကူဆုံးရောဂါအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆီးနည်းနည်းသွားခြင်းက အမျိုးမျိုးသောနေမကောင်းခြင်းများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကျောက်ကပ်ေရောဂါကို ညွှန်ပြနေပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ကနေစွန့်ထုတ်စစ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ blood urea nitrogen (BUN) and creatinine (Cr)ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ သွေးတွင်းပမာဏများနေခြင်းက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ညွှန်ပြနေပါတယ်။
အယ်လ်ထရာဆောင်း၊ အမ်အာအိုင်၊ စီတီစကန်စတဲ့နည်းတွေနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှေက်နဲ့အတူ ကျောက်ကပ်ကိုပါပုံဖော်မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်များအတွင်း ပိတ်ဆို့မှု၊ ပုံမမှန်မှုများရှိမရှိ ဆရာဝန်ကအဖြေရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ရှူးနမူနာတွေကို ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအနည်ထိုင်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာဖြစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ် ကူးစက်ပိုးတွေကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်တစ်ရှူးစထုတ်ခြင်းနည်းနဲ့ တစ်ရှူးနမူနာကိုထုတ်ယူပါတယ်။ တစ်ရှူးစထုတ်ယူခြင်းနည်းက များသောအားဖြင့်နိုးနေတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ မသက်မသာဖြစ်ခြင်းတွေကိုရှောင်နိုင်ဖို့ ထုံဆေးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရှူးထုတ်ယူတဲ့အပ်ကို အရေပြားမှဖောက်ပြီး ကျောက်ကပ်အတွင်းထိထိုးထည့်လိုက်ပြိး အသားစကိုယူပါတယ်။ အိက်စ်ရေး၊ အယ်လ်ထရာဆောင်းစက်တွေနဲ့ ကျောက်ကပ်တည်နေရာကိုသိနိုင်ပြီး ဆရာဝန်ကိုအပ်ထိုးရာမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။
Kidney Injury (ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းအတွက် ကုသမှုမြောက်များစွာရှိပေမဲ့ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုအမျိုးအစားကွဲပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
စက်ကိုအသုံးပြုပြီး သွေးကိုစစ်ထုတ်သန့်စင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သွေးသန့်စင်ခြင်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ကြီးမားတဲ့စက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အိတ်နဲ့ဆကာ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သွေးသန့်စင်ခြင်းပြုနေစဉ်အတွင်း ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဆားနည်းတဲ့အစားအစာတွေကိုသာ ညွှန်းလေ့ရှိပါတယ်။ သွေးသန့်စင်ခြင်းက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကို ပျောက်ကင်းအောင်မကုသနိုင်ပေမဲ့ ပုံမှန်ကုသမှုခံယူနေခြင်းမယ်ဆိုရင် သင့်သက်တမ်းကိုရှည်စေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကုသမှုနည်းလမ်းကတော့ ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓါကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ကျောက်ကပ်ကိုလက်ခံရရှိုနိင်ဖို့ အကြာကြီး စောင့်ရလေ့ရှိပါတယ်။ အစားထိုးကုသခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ကျောက်ကပ်အသစ်ကအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တာကြောင့် သွေးသန့်စင်ခြင်းထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ မကောင်းတာကတော့ ခုခံအားဖိနှိပ်ပေးတဲ့ဆေးတွေကို ခွဲစိတ်ကုသမှုနောက်ပိုင်း အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနေပြီး အချို့ကပြင်းထန်ပါတယ်။ အစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်း မအောင်မြင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက ကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေရဲ့ ဆေးညွှန်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။ (အက်စပရင်ကဲ့သို့သောအသုံးများတဲ့ဆေး)ပမာဏအများကြီးသုံးစွဲခြင်းက အချိန်တိုအတွင်း အဆိပ်အတောက်တွေများလာနိုင်ပြိး ကျောက်ကပ်ကိုဝန်ပိစေနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တွင်းအသုံးပြုသန့်စင်ဆေး၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ အခြားအဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းများ စတဲ့ဓါတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ခြင်း
ဆရာဝန်အကြံပေးသည့်အတိုင်း၊ ဆေးညွှန်းမှာပါသည့်အတိုင်း လိုက်နာခြင်း
1. Kidney Failure. http://www.healthline.com/health/kidney-failure#Overview1. Accessed2Jan 2017
2. Kidney Failure. http://www.medicinenet.com/kidney_failure/article.htm. Accessed2Jan 2017
3. At Risk for Kidney Disease? https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-communication-programs/nkdep/learn/causes-kidney-disease/at-risk/Pages/are-you-at-risk.aspx. Accessed2Jan 2017